foldablae r809h baaskiil e-baaskiil korontada la 12inch jir daawaha aluminium - Shiinaha Shenzhen Rooder Technology
foldablae baaskiil korontada r809h e-baaskiil la aluminium 12inch jir daawaha
Excellent dibada Activity E-Bike - Design waxqabadka dibadda, horjooguhu fuushaan magaalooyinka, fasalka iyo sidoo kale-doortay sare Aluminum Daawaha caawinta aad ku raaxaysato oo xiiso leh ee dibadeed.
Eco-Friendly E-Bike - 100% Electric iyo qiiqa free, ilaalinta deegaanka, oo khafiifa, mid aad u fudud in ay ku kaydiso oo u qaado
Unisex Design E-Bike - 2 Color (Black / White) la heli karo, is haysta ku tiinbiyo oo raadinaya suud loogu tala galay dumarka, ragga iyo dhalinyarada, qaab aad u fiican (Front, Back gaari Electric jejebiyey disc) kaa caawinaysaa in aad ku raaxaysan xawaaraha iyo farxad of dibadda.
Gaar Working Hababka - E-baaskiil & baaskiil Caawiso. Waxaad dooran kartaa e-baaskiil inay ku raaxaystaan safar waqti dheer oo aan bulshkuleetiga, iyo sidoo kale waxaad dooran kartaa hab PAS inay xoojin dadaallada adiga kuu gaar ah. Ku raaxayso Waxaad faraskaaga ku fuushaa leh hab kasta. 36V 6.6AH Lithium Battery kor u taageertaa inay 25km / h kala duwan ee saaran 23-30km. Oo waxay soo eedeeyo si fudud (3 saacadood).
foldablae baaskiil korontada e-baaskiil r809h la 12inch aluminium daawaha jir ka Rooder warshad e-baaskiil
: model r809 h
wax jir: aluminium daawaha
xawaaraha max: 25km / h
masaafada (saafi koronto): 25km
masaafada (gargaar) 23-30km
amraya time: 3.5h
badnaan loading: 150kg
awood motor: 350w
max fuulitaanka: 12 °
miisaanka net: 14kg
size taayirrada: 12inch
function: korontada iyo pas
kala jejebiyey, double disc jejebiyey
Esplanaden: double Esplanaden
barkinta kursiga, waxbaa laga beddeli karaa
color: madow / caddaan
size fool (l * w * h): 107 * 45 * 90cm
size-laabanto (l * w * h): 107 * 45 * 73cm
Previous: citycoco mini mooto korontada r804n Rooder la 48v800w motor iyo batari lithium
Next: laabi Electric mooto Rooder r803l 10 "Taayirada Air Buuxinaya 45kmh ilaa 40km Range
baaskiil rakaab ah
dib u eegis baaskiil korontada
rooder baaskiil korontada
baaskiilada haweenka lasoo
EEC citycoco mooto korontada Rooder r804r la ...
caigiees citycoco mooto korontada r804i EEC CO ...